Tatitra fitetezam-paritany KAIMAN ISLANDS - trano misy androngo tsy fahita firy sy ivon'ny banky iraisam-pirenena - Sven Luca World
Tatitra fitsangatsanganana KAIMAN ISLANDS - trano misy androngo tsy fahita firy sy ivon'ny banky iraisam-pirenena
Visa sy ny fepetra takiana amin'ny Nosy Cayman:
Ilaina ny pasipaoro
Tsy mila visa
Fampahalalana avy amin'ny Federal Foreign Office amin'ny dianao mankany amin'ny Nosy Cayman:
Ny Nosy Cayman dia vondrona nosy any Karaiba sy ny faritany ampitan-dranomasina anglisy any Angletera izay misy mponina manodidina ny 50.000. Ny faritany iray manontolo dia misy ireo nosy telo Grand Cayman, Little Cayman ary Cayman Brac ary eo amin'ny lafiny jeografika eo amin'ny 350 kilometatra atsimon'i Kiobà.
Ny nosy dia manana ny anarany amin'ny karazana androngo marobe monina eto, ireo caimans, izay noheverina ho voay tamin'ny voalohany.
Ny fiteny ofisialy amin'ireo nosy dia ny anglisy ary ny vola any an-toerana dia ny dolara Cayman Island, fa ny dolara amerikana sy ny pound anglisy kosa dia ekena ho fitaovana fandoavana. Ny dolara Cayman KYD dia saika mitovy amin'ny euro amin'ny isa 1 ka hatramin'ny 1.
Ny renivohitry ny Nosy Cayman dia George Town miaraka amin'ny mponina manodidina ny 30.000. George Town no ivon'ny rafitry ny banky archipelago, antsoina hoe fialofana hetra ary koa ny foibem-bola lehibe fahadimy eto an-tany.
Saika ny banky mavitrika rehetra no manana sampana eto. Noho ny fanafoanana ny hetra sy ny fepetra ilaina amin'ny rafitra hafa, ity sampana lehibe indrindra amin'ny toekarena eto amin'ny firenena ity dia mahazo tombony be. Izany no mahatonga ny Nosy Cayman koa heverina ho toeram-pialofana hetra. Ny vokatra anatiny eto an-toerana isaky ny kapita ao Kaiman no iray amin'ny avo indrindra eto an-tany.
Ny toerana misy seranan-tsambo ho an'ny sambo fitsangantsanganana sy ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena dia tena akaikin'ny tanàna. Sambo manodidina ny 1.500 no voasoratra anarana ao amin'ny seranan-tsambon'ny Nosy Cayman.
Ny Nosy Cayman dia mandray mpizahatany manodidina ny 2,5 tapitrisa isan-taona, manodidina ny roa tapitrisa amin'izy ireo dia tonga tamin'ny sambo fitsangantsanganana tany George Town nandritra ny ora vitsivitsy.
Ny zava-dehibe indrindra amin'ny Grand Cayman dia ny tilikambo lakolosy King George V, ny lapan'ny fitsarana, ny Museum Maritime, ny paositra lehibe, Seven Mile Beach - iray amin'ireo morontsiraka tsara indrindra eto an-tany, ny National Museum of the Cayman Islands, Heroes Square , ny avaratra Rum Point - karazana afovoan-tany any Karaiba, ny tranoben'i St. James ao Bodden Town, ilay lava-bato piraty, amoron-dranomasin'i Stingray City miaraka amin'ireo fantsom-pihetsiketsika, tontolo anaty rano mahavariana misy faritra antsitrika isan-karazany, toeram-pambolena sokatra, fahatsiarovana fandriam-pahalemana ihany koa. ny toerana fitsangantsanganana malaza Hell - Tongasoa eto amin'ny Afobe.
Nasiana toeram-pialofana vorona lehibe ho an'ny pelikanina sy cormorant ao Little Cayman, iray amin'ireo toerana farany mbola tsy simba ao Karaiba. Ity nosy ity koa dia iray amin'ireo faritra fanjonoana salmon tsara indrindra manerantany.
Tamin'ny volana Jona 2015 dia izaho irery no teto Cayman Islands hatreto. Nidina an-tsambo niaraka tamin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka "Cayman Airways" avy any Montego Bay any Jamaika aho ary nandany andro telo nahafinaritra tao Grand Cayman.
Nandritra io fotoana io dia nahita trano nipetrahanay niaraka tamin'i Lisa, Amerikanina, tao amin'ny tranony faharoa kely sy misaraka ary maoderina tanteraka aho, eo akaikin'ny morontsiraka any West Bay. I Lisa, izay nihaona tamiko taloha tamin'ny alàlan'ny sehatra internet “Couchsurfing”, dia vintan'ny vintana tokoa noho ny nijanonako tany, trano fandraisam-bahiny mahazatra matetika no tsy nety.
Vantany vao tonga tany Lisa aho, dia nandeha an-tongotra voalohany nankany amin'ilay "Hell", teo amin'ny toerana malaza Hell, ary avy eo nankany amin'ny Seven Mile Beach malaza, nandritra ny tolakandro milamina sy miala sasatra. Ity morontsiraka fasika fotsy mahavariana sy lava ity dia an'ny morontsiraka tsara tarehy roapolo eto an-tany ho ahy.
Taorian'ny fitsidihana tanàna be dia be niaraka tamin'ny mpampiantrano ahy namakivaky ny renivohitra George Town ny ampitso maraina, ny tena zava-nisongadina dia ny fandaharam-potoana amin'ny tolakandro, fitsangatsanganana jet mankany Stingray City.
Rehefa avy nitaingina 20 minitra teo ambonin'ny vatom-pasika haingana dia nisy fasika iray teo afovoan'ny ranomasina izay nipetraka tamina tara-pahazavana an-jatony. Ny fepetra ivelany dia tsy mety ho tsara kokoa, tara-pahazavana mamirapiratra ary rano turquoise mamirapiratra, tena nitovy tamin'ny sarin'ny karatra paositra izany.
Ireny tohatra lomano tsy tambo isaina ireto dia tsy nampitony ahy loatra ka afaka nilalao ara-bakiteny tamin'izy ireo aho. Satria tsy afaka naka fakantsary niaraka tamiko aho rehefa nandeha tamin'ny jet ski ary tao anaty vatan-dranomandry ihany, indrisy fa tsy misy sarin'ity traikefa tokana sy mahavariana ity.
Taorian'ity andro tsy hay hadinoina ity dia nanasa an'i Lisa aho hisakafo hariva tao amin'ny trano fisakafoanana malaza any West Bay mba hisaotra azy noho ity fijanonana mahafinaritra any amin'ny Nosy Cayman ity.
Ny Nosy Cayman dia tsy isalasalana fa mendrika fitsangatsanganana foana, na dia tsy dia mora vidy aza izy io na dia misy aza ny fanavotana hetra. Ho ahy, ny nosy dia iray amin'ireo toeran-kaleha lavitra indrindra amin'ny fivezivezena any Karaiba manontolo.
Nandritra ny sivy herinandro nitetezako tany Karaiba, taorian'ny nijanonako mahatalanjona tao amin'ny Nosy Cayman, dia nanidina nankany Havana, renivohitr'i Kiobà aho.
Ny tatitra momba ny fitsangatsanganana JAMAIKA - trano Karibeana amin'ny kolontsaina Rastafarian malaza eran-tany sy ny mozika reggae malaza eran-tany
Travelogue CUBA - sigara, rum ary amoron-dranomasina mametraka any amin'ny nosy sosialista sosialy farany
Tatitra momba ny dia TORKS SY CAICOS NOSY - Nosy Karaiba toy ny nofinofy misy tontolo anaty rano mahavariana sy morontsiraka tsara tarehy indrindra eto an-tany
Tatitra momba ny dia TRINIDAD SY TOBAGO - Fanjakana atsimon'i Karaiba mandrafitra nosy roa mifanohitra tanteraka
Tatitra momba ny dia ST. VINCENT SY NY GRENADINES - Ilay paradisa an-dranomasina malaza eran'izao tontolo izao any amin'ny faritra atsimon'i Karaiba
I am Sven Luca, iray amin'ireo olona be mpandeha indrindra eran'izao tontolo izao ary mpikambana iray ao amin'ny Hall of Fame Wisatawan ao Auckland. Hatramin'ny 08 martsa 2019 dia anisan'ny vondrona voafantina olona 28 fotsiny aho eto amin'ity planeta ity izay nitsidika ny firenena tsirairay teto ambonin'ny tany. Tsy ao anatin'izany ihany ireo firenena mikambana tamin'ny 193 izay fantatro fa niaraka tamin'i Samoa tamin'ny 03 tamin'ny 2019 Febroary 196.
Mahazoa vaovao momba ahy
Mandehandeha amin'ny mailaka !!